အိုငျစီဂအြေမှုအတှကျ ငှတေောငျးခံမှုအပျေါ တပျကိုယျစားလှယျ မေးခှနျးထုတျ - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
တပျမတျောသားလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဗိုလျမှူး နိုငျလငျးအောငျကို ၂၀၂၀၊ မေ ၂၂ ရကျနေ့ ကငျြးပတဲ့ ပွညျထောငျစုလှတျတျော အစညျးအဝေးမှာ တှရေ့စဉျ / ဓာတျပုံ - ပွညျထောငျစုလှတျတျော
"နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန နိုငျငံခွားရေးရာဦးစီးဌာနရဲ့ ဖွညျ့စှကျခှငျ့ပွုငှေ တောငျးခံမှုမှာ သာမာနျ အသုံးစရိတျလုပျအားအတှကျ ကုနျကစြရိတျခေါငျးစဉျမှာ ဂမျဘီယာနိုငျငံက တရားစှဲဆိုမှုကို ရငျဆိုငျဖွရှေငျးရေးအတှကျ ကုနျကစြရိတျမြား၊ သယျယူပို့ဆောငျခ ခေါငျးစဉျမှာ ဗိုလျခြုပျရုပျရှငျရိုကျကူးရေးအတှကျ သယျယူပို့ဆောငျစရိတျမြား၊ ဓာတျဆီစကျဆီ ခြောဆီခေါငျးစဉျမှာ ပွညျပကိုယျစားလှယျမြား အသုံးပွုဖို့ ဗဟိုစကျပစ်စညျးမှ ငှားရမျးအသုံးပွုတဲ့ ယာဉျနဲ့ ဆိုငျကယျမြားရဲ့ စကျသုံးဆီကုနျကစြရိတျမြားကို တငျပွထားရာ ဒီဖွညျ့စှကျတောငျးခံမှုတှဟော ဥပဒနေဲ့ညီရဲ့လား၊ လုပျထုံးလုပျနညျးနဲ့ညီအောငျ ဆောငျရှကျဖို့လိုအပျပါတယျ"
ဒါနဲ့ပတျသကျပွီးဝနျကွီးဌာနအသီးသီးက တငျပွလာတဲ့ ဖွညျ့စှကျငှတှေကေို စိစဈပွီး လှတျတျောကိုပွနျတငျပွတောငျးခံရတဲ့ လှတျတျောပွညျသူ့ငှစောရငျး ပူးပေါငျးကျောမတီက ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဦးအောငျမငျးကို RFA က ဆကျသှယျမေးမွနျးရာမှာတော့.
"အိုငျစီဂဆြေိုတာ နိုငျငံတျောကို တရားစှဲတာပါ အိုငျစီဂကြေိစ်စကို သှားရောကျဖွရှေငျးတယျဆိုတာကလညျး နိုငျငံတျောရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာအတှကျ နိုငျငံဘကျကနေ ရပျတညျပွီး နိုငျငံအတှကျသှားရှငျးတာပါ။ အဲ့ဒီအတှကျ ဒီပိုကျဆံတှသေုံးတယျ၊ ဒီ ပိုကျဆံတှေ တောငျးလာတဲ့ကိစ်စကို စညျးမဉျြးနဲ့ညီရဲ့လားလို့ သာမာနျအသိဉာဏျရှိတဲ့ လူတဈယောကျလို စဉျးစားကွညျ့လိုကျပါ။ မေးသငျ့သလား မမေးသငျ့သလား၊ ကနြျောတို့ ပွညျသူ့ငှစောရငျး ပူးပေါငျးကျောမတီ စိစဈမှုသညျ တကျလာကတညျးက အဆငျ့ဆငျ့စိစဈပွီးတကျလာတယျ ဘဏ်ဍာရေး စညျးမဉျြးစညျးကမျးနဲ့ညီညှတျတဲ့ အသုံးစရိတျတှေ ဖွဈတဲ့အတှကျ အဆငျ့ဆငျ့တာဝနျယူပွီး တငျပွလာတာဖွဈတဲ့အတှကျ ဒီအသုံးစရိတျတှသေညျ ဘဏ်ဍာရေးစညျးမဉျြးနဲ့ ညီညှတျတယျလို့ ယုံကွညျတယျ "
အိုငျစီဂကြေိစ်စက ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာမှာ ပျေါလာတဲ့အခါ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနအနနေဲ့ အိုငျစီဂကြေုနျကစြရိတျကို ပုံမှနျအသုံးစရိတျထဲကနေ ထုတျသုံးခဲ့တာဖွဈပွီး အဲလိုထုတျသုံးခဲ့တာကွောငျ့ ပုံမှနျသုံးရမယျ့ လုပျငနျးတှအေတှကျ သုံးစရာငှကွေေးမရှိတော့လို့ ခုလို ဖွညျ့စှကျ ခှငျ့ပွုငှေ ထပျမံတောငျးခံတာဖွဈတယျလို့ လညျး ပွညျသူ့ငှစောရငျး ပူးပေါငျးကျောမတီ ဒုဥက်ကဌ ဦးအောငျမငျးက ပွောပါတယျ။
ဝနျကွီးဌာနအသီးသီးက တငျပွလာတဲ့အသုံးစရိတျတှကေို စီမံဘဏ်ဍာဝနျကွီးဌာနကစိစဈပွီးနောကျ ဒုသမ်မတ(၁) ဦးဆောငျတဲ့အဖှဲ့က ထပျမံစိစဈပွီးမှသာ ဘဏ်ဍာရေးကျောမရှငျထံ တငျပွရပါတယျ။ အဲဒီနောကျ ဘဏ်ဍာရေးကျောမရှငျက အတညျပွုခကျြကို လှတျတျောငှစောရငျး ပူးပေါငျးကျောမတီက ထပျမံစိစဈကာ လှတျတျောကိုတငျပွတောငျးခံရတာ ဖွဈပါတယျ။
အိုင်စီဂျေအမှုအတွက် ငွေတောင်းခံမှုအပေါ် တပ်ကိုယ်စားလှယ် မေးခွန်းထုတ်
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တရားစွဲဆိုမှုကို မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ် ကျပ်သန်းပေါင်း ၆၈၀ ကို ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေအဖြစ် ချပေးဖို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက လက်ရှိ ကျင်းပနေတဲ့ ၁၆-ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြတောင်းခံထားပါတယ်။
တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူး နိုင်လင်းအောင်က ဒီလိုတောင်းခံတာဟာ ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ရဲ့လားဆိုပြီး မေလ ၂၂ ရက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာပါ။
"နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံခြားရေးရာဦးစီးဌာနရဲ့ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ တောင်းခံမှုမှာ သာမာန် အသုံးစရိတ်လုပ်အားအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ခေါင်းစဉ်မှာ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တရားစွဲဆိုမှုကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရေးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခ ခေါင်းစဉ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်များ၊ ဓာတ်ဆီစက်ဆီ ချောဆီခေါင်းစဉ်မှာ ပြည်ပကိုယ်စားလှယ်များ အသုံးပြုဖို့ ဗဟိုစက်ပစ္စည်းမှ ငှားရမ်းအသုံးပြုတဲ့ ယာဉ်နဲ့ ဆိုင်ကယ်များရဲ့ စက်သုံးဆီကုန်ကျစရိတ်များကို တင်ပြထားရာ ဒီဖြည့်စွက်တောင်းခံမှုတွေဟာ ဥပဒေနဲ့ညီရဲ့လား၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ညီအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်"
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ပြည်ထောင်စုရဲ့ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်းရဲ့မူနဲ့ အခြေခံသဘောအပါအဝင်၊ ရငွေ၊ သုံးငွေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေလ ၂၂ ရက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ လွှတ်တော်အမတ် ၁၈ ဦး ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးစဉ်မှာ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူး နိုင်လင်းအောင်က မေးခွန်းထုတ် ဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။
ဒီလိုတောင်းခံမှုတွေကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်း သူက ထောက်ပြဆွေးနွေးသွားပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်စားရိတ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးအိုင်စီဂျေမှာ၊ ဂမ်ဘီယာက မြန်မာအပေါ် တရားစွဲဆိုထားမှုကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတဲ့အခါ သုံးစွဲခဲ့တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်အပါအဝင် အိုင်စီဂျေနဲ့ဆက်စပ်ပြီး နောက်ထပ်ဆောင်ရွက်ဖို့ ကျန်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက် စုစုပေါင်း လိုငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ၆၈၀ ကို ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေအဖြစ် လွှတ်တော်ကို တင်ပြတောင်းခံထားတာပါ။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေတောင်းခံမှုနဲ့ ဒီအပေါ် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ ကန့်ကွက်မေးခွန်းထုတ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ တစ်စုံတစ်ရာ မှတ်ချက်ပေးဖို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ကို RFA-က ဖုန်းနဲ့အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့် ဆက်သွယ်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက တင်ပြလာတဲ့ ဖြည့်စွက်ငွေတွေကို စိစစ်ပြီး လွှတ်တော်ကိုပြန်တင်ပြတောင်းခံရတဲ့ လွှတ်တော်ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီက ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်းကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာတော့.
"အိုင်စီဂျေဆိုတာ နိုင်ငံတော်ကို တရားစွဲတာပါ အိုင်စီဂျေကိစ္စကို သွားရောက်ဖြေရှင်းတယ်ဆိုတာကလည်း နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် နိုင်ငံဘက်ကနေ ရပ်တည်ပြီး နိုင်ငံအတွက်သွားရှင်းတာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် ဒီပိုက်ဆံတွေသုံးတယ်၊ ဒီ ပိုက်ဆံတွေ တောင်းလာတဲ့ကိစ္စကို စည်းမျဉ်းနဲ့ညီရဲ့လားလို့ သာမာန်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်လို စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ မေးသင့်သလား မမေးသင့်သလား၊ ကျနော်တို့ ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီ စိစစ်မှုသည် တက်လာကတည်းက အဆင့်ဆင့်စိစစ်ပြီးတက်လာတယ် ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အသုံးစရိတ်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင့်ဆင့်တာဝန်ယူပြီး တင်ပြလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအသုံးစရိတ်တွေသည် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနဲ့ ညီညွတ်တယ်လို့ ယုံကြည်တယ် "
အိုင်စီဂျေကိစ္စက ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ ပေါ်လာတဲ့အခါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ အိုင်စီဂျေကုန်ကျစရိတ်ကို ပုံမှန်အသုံးစရိတ်ထဲကနေ ထုတ်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲလိုထုတ်သုံးခဲ့တာကြောင့် ပုံမှန်သုံးရမယ့် လုပ်ငန်းတွေအတွက် သုံးစရာငွေကြေးမရှိတော့လို့ ခုလို ဖြည့်စွက် ခွင့်ပြုငွေ ထပ်မံတောင်းခံတာဖြစ်တယ်လို့ လည်း ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီ ဒုဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်းက ပြောပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြည့်စွက်တောင်းခံလာတာကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက လွှတ်တော်မှာ လာရောက်ရှင်းလင်းပေးတဲ့အခါမှာ အဖြေမှန်သိရမယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက တင်ပြလာတဲ့အသုံးစရိတ်တွေကို စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနကစိစစ်ပြီးနောက် ဒုသမ္မတ(၁) ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က ထပ်မံစိစစ်ပြီးမှသာ ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ထံ တင်ပြရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်က အတည်ပြုချက်ကို လွှတ်တော်ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီက ထပ်မံစိစစ်ကာ လွှတ်တော်ကိုတင်ပြတောင်းခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ပြည်ထောင်စုရငွေက ကျပ်ငွေ ဘီလျံ နှစ်သောင်းခုနှစ်ထောင်ကျော်ဖြစ်ပြီး၊ သုံးစွဲငွေက ကျပ်ငွေ ဘီလျံ သုံးသောင်းလေးထောင်ကျော် ရှိပါတယ်။
ဒီအတွက် အစိုးရအဖွဲ့မှာ ကျပ်ငွေ ဘီလျံ ခြောက်ထောင်ကျော် လိုငွေပြနေပြီး၊ အဲဒီအထဲကမှ မဖြစ်မနေသုံးစွဲရမယ့် ကျပ်ငွေ ဘီလျံ နှစ်ထောင့်ခြောက်ရာခြောက်ဆယ်ကျော် (၂၆၆၀.၉၈၇) ကို၊ လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ ၁၆-ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ တောင်းခံထာပြီး၊ ဒီကိစ္စအပေါ် လွှတ်တော်အမတ်တွေက ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။